Lixabiso Shaft Double isichumisi Umxhubi Machine Suppliers kunye Factory | YiZheng
Yintoni umatshini weSixuber Shaft Umxhubi?
Umatshini weSixube seShaft esiphindwe kabini sisixhobo esisebenzayo sokuxuba, okukhona ixesha elide itanki ephambili ingcono isiphumo sokuxuba. Izinto eziphambili ezingafunekiyo kunye nezinye izinto ezincedisayo zondliwa kwizixhobo ngaxeshanye kwaye zixutywe ngokufanayo, emva koko zithunyelwa ngumthuthi webhanti kwinkqubo yegranulation yegranulation. Inkqubo ye- Umatshini weSixube seShaft esiphindwe kabini isebenzisa isakhiwo inoveli inoveli ukutyumza izinto ezinkulu ngelixa zivusa, ukuze kufezekiswe injongo ukuxubana efanayo. Umatshini unesakhiwo esixineneyo, ukutywina okuhle, ukubonakala okuhle kunye nokusebenza okufanelekileyo kunye nokugcinwa.
Wenzelwa ntoni Umxhubi wesichumisi esiphindwe kabini?
Zimbini ii-axical helical axes ezijikeleza ngokungqinelanayo emzimbeni ophambili we Umatshini weSixube seShaft esiphindwe kabiniI-axis ye-helical ifakwe kwi-blade ye-pulp ejikelezayo. I-pulp blade iya kuguqula izinto kunye nokujikeleza kwe-axial kunye ne-radial kwi-Angle ethile, ukuze loo nto ikwazi ukudityaniswa ngokukhawuleza nangokulinganayo. Isongezo sokondla umatshini sinikezwe ngokuxutywa nothuli, okunokuthintela ngokufanelekileyo ukwenziwa kwenkungu yamanzi. Indawo yoqhakamshelwano phakathi kweplp blade inxibelelana ngokupheleleyo nezinto ukwenza ukuxubana ngakumbi. Inkqubo ye-Umatshini weSixube seShaft esiphindwe kabini ngokulinganayo ingamanzisa izinto ezingumgubo xa uyishukumisa. Ikhrayitheriya yezinto ezi humidified ayisiyomdaka owomileyo okanye ukopha kwamanzi. Ukunyibilikisa okunyibilikayo kubeka isiseko senkqubo yothutho elandelayo kunye nenkqubo yegranulation.
Ukusetyenziswa koMatshini weSixube soMxube weShaft
Inkqubo ye- Umatshini weSixube seShaft esiphindwe kabini ilungele ukuxubana ngaphezu kweentlobo ezimbini zesichumisi, izixube ezongeziweyo, ukutya okuhlanganisiweyo, ukutya okuxineneyo, ukutya okongezelekileyo kwangaphambili, njl.
Izinto eziluncedo ze kabini Shaft isichumisi Umxhubi Machine
(1) ukusebenza okuzinzileyo.
(2) Umthamo omkhulu ovuselelayo.
(3) Imveliso eqhubekayo.
(4) Ingxolo engezantsi.
(5) Easy ukuba ufakelo kunye nokugcinwa.
Isichumisi esiphindwe kabini somxube weVenkile yoMatshini weVidiyo
Ukukhethwa komatshini wokuxuba umatshini weShaft kabini
Egqithileyo Ngeendiza & Wood isityumzi
Okulandelayo: Umxhubi oxwesileyo oxwesileyo